संसदमा के ल्याएको हो भन्ने पनि मलाई थाहा छैन : गोकुल बाँस्कोटा - Dainik Online Dainik Online
संसदमा के ल्याएको हो भन्ने पनि मलाई थाहा छैन : गोकुल बाँस्कोटा
प्रकाशित मिति : २५ भाद्र २०७८, शुक्रबार ७ : ५८
काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का सांसद एवं पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले शुक्रबार संसदमा के आ भएको भन्नेबारे आफू अनविज्ञ रहेको बताएका छन।
बैठकपछि सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले संसदमा आज के ल्याएको हो भन्ने पनि आफूलाई थाहा नभएको बताए।
उनले भने, ‘आज संसदमा के ल्याको हो मलाई केही थाहा छैन।’
सांसद बाँस्कोटाले सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम भुमिका पनि निर्वाह नभएको भन्दै आलोचना गरे।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असमान व्यवहार गरेको र आफुहरुप्रति असहिष्णु व्यवहार गरेको भन्दै उनले सभामुखलाई मान्न नसकिने बताए।
सभामुखको गलत कामको आफुहरुले विरोध गरेको उनले बताए। उनले भने – ‘त्यो कुर्सिमा बसिरहँदाखेरी सबै दलप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्छ। उहाँले त्यो काम गर्नुभएन। हाम्रो विरोध त्यसप्रति हो। यतिसम्म असहिष्णुता देखाइसक्नु भाछकी कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा त्यसका सदस्यहरुलाई समेत कार्यसूची र एजेण्डा उहाँ दिनुहुन्न भनेपछि उहाँले संसद कसरी चलाउनुहुन्छ ? हामीले अवरोध गर्न खोज्या हो र ? उहाँको तरीका गलत भयो त्यसको विरोध गरेको हो। प्रतिवाद गरेको हो।’
यस्तै, बैठकपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश भएको प्रतिस्थापन विधेयकले आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने बताए।
शुक्रबारको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिदैँ अर्थमन्त्री शर्माले आफूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको बताए।
उनले बजेट मात्रै बिनियोजन भएको तर कुनै काम नहुने खालको योजनाहरुलाई हटाएको बताए।
प्रतिस्थापन विधेयकको मुख्य पक्ष आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री शर्माले भने– ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मैले आज प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छु। यसको मुख्य पक्ष के हो भने पहिलो कुरा आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्दै मितव्ययिता कायम गर्ने रहेको छ। अर्थ नभएका बजेटमात्र विनियोजन गरेका त्यस्ता योजनाहरुलाई मैले हटाएको छु र चालु खर्च अन्र्तगत तालिम भत्ता लगायतको बजेट १० प्रतिशत कटौती गरेर कोभिडको लागि भ्याक्सिन किन्ने बजेटमा मैले त्यसलाई रुपान्तरण गरेको छु ।’
अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशत पुग्ने दाबी पनि गरे।
उनले भने–‘निश्चित समय भित्र कोभिड भ्याक्सिन दिइसक्छौँ। र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान भयो भने आर्थिक वृद्धि ७ प्रतिशतमा स्वत्ः पुग्नेछ।’
सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारलाई पूर्णता चाडैँ दिने बताए। मन्त्रालय भागबन्डाको कुरा पनि मिलिनसकेको उनले जानकारी दिए।
एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा मुलुकको हित अनुकुल अगाडी बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ।
उनले भने – ‘अब चाडैँ नै यसलाई पुर्णता दिने तयारीमा हामी लागेका छौँ। मन्त्रालयको भागबन्डा पनि मिलाउन बाँकी नै छ । एमसीसीलाई राष्ट्रिय सहमतीको आधारमा त्यस विषयमा निर्णय गर्नुपर्छ । र मुलुकको हित अनुकुल अगाडी बढाउनुपर्छ।’
अध्यक्ष यादवले प्रतिस्थापन विधेयकको आवश्यकता भएकै कारण ल्याइएको बताए।